Twitter malala, ajanony azafady ity hadalana manaraka ity | Martech Zone
Twitter malala, ajanony azafady ity hadalana manaraka ity
Alakamisy, May 7, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Isan'andro dia mitandrina ny fanarahako aho amin'ny Twitter. Ny mpikambana tsirairay avy ary manaraka ahy dia nisy dikany foana. Nanangana ny fanarahana ahy ara-organika aho, tamin'ny alàlan'ny fankasitrahana mpanaraka iray isaky ny mandeha.
Tsy izay intsony. Mampihomehy izao… manara-dia ny onja novonoina isa-minitra. Afaka nandeha tao amin'ny Twitter aho androany ary mahita mpisoloky an-jatony izay hampiakatra anao ny mpanaraka maherin'ny 10,000 ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny Twitter dia tsy maintsy mihenjana noho ny lanjany miavaka amin'ireo isa ireo.
Tsy haiko izay manery ny olona hamitaka ny isa hahazoana valim-bazaha foana. Karazana ego inona no ilainao hivoahana amin'io lalana io? Tsy azoko antoka fa tena mahasosotra ahy izany. Nisy dikany ny mpanaraka ahy 5,000. Maherin'ny 6,000 aho izao… fa maro amin'ireo mpanaraka vaovao no manaraka ny feo mandeha ho azy.
Ireo rafitra mpanaraka azy ireo dia tsy maintsy miasa ivelan'ny Twitter, ka tokony ho mora ny mamantatra sy manakana azy ireo. Tokony hanao izany ny Twitter dieny izao - tsy ny fanalana ny tenany fotsiny amin'ny fihoaram-pefy taorian'ny fanisam-bahoaka, fa ny fanalefahana ny fihenjanana izay tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka rehetra ireo mba hisy fiantraikany amin'ny zava-bitan'ny Twitter ho antsika sisa mankasitraka ny serivisin'izy ireo.
Azafady Twitter… manaova zavatra momba izany! Manimba ny fangatahanao izy ireo.
Inona no mahatonga ny mpandinika tsara?
Rindrambaiko Twitter 10 ho an'ny orinasa
May 8, 2009 amin'ny 12: 29 AM
Zatra manaraka fiara aho rehefa nanomboka voalohany ary avy eo nahatsapa ireo karazan'olona ekeko fa tsy izay tiako harahina. Ankehitriny dia mifantina sy misafidy tsirairay aho. Manaraka anao aho izao rehefa nanamarina fa mbola tsy teo.
May 8, 2009 amin'ny 12: 32 AM
Tena nametraka fangatahana tao amin'ny Twitter aho mba hanesorana ny fanaraha-masoko fa tsy mbola henoko ny valiny… Mieritreritra aho fa be atao izy ireo izao! Manantena aho fa hanampy safidy izy ireo hahafahako mamono azy fotsiny. Manenina aho izao ry Michael!
Manamarina ny tsirairay avy aho ary manala ny fanarahana azy rehefa hitako fa spammer fotsiny izy ireo na telefaona manaraka azy (miakatra avy amin'ny mpanaraka vitsivitsy hatramin'ny an'arivony ao anatin'ny herinandro) izy ireo.
May 8, 2009 amin'ny 8: 36 AM
eo amin'ny fanapahana manerantany izao ny twitter. ny olona rehetra ao amin'ny biraoko dia mijery twitter fotsiny foana. tsy nanangana fanarahana mandeha ho azy aho
May 8, 2009 amin'ny 9: 07 AM
Mampihomehy tokoa fa ny doka amin'ny sora-baventy eo an-tampon'ity lahatsoratra ity dia ho an'ny serivisy iray izay hahazoanao mpanaraka 4,000 $ 12.95.
Esoeso? Misaotra an'i Google!
May 8, 2009 ao amin'ny 5: 35 PM
Izany ny feon'i Doug mikiakiaka henonao! Doh!
May 8, 2009 amin'ny 10: 27 AM
Toa isaky ny manampy lahatsoratra amin'ny twitter aho dia misy mpanaraka vaovao dimy eo ho eo?
May 8, 2009 amin'ny 10: 38 AM
Vaovao amin'ny twitter aho fa afaka mahita ny olana sy ny korontana mety hitranga. Ampio hahazo fanohanana amin'ny fampielezan-kevitra ataoko mba hahitan'ny olona ny mazava sy hijanonany amin'ny fanarahan-dia auto robors, script ary serivisy.
May 8, 2009 ao amin'ny 5: 38 PM
May 8, 2009 ao amin'ny 4: 03 PM
Fohy loatra ny fiainana ka mety hofenoina olona tsy mitovy fahalianana aminao ... Tsapako fa ny fifandraisana dia tokony ho toy ny tavoahangy divay "Tsara" tokony hifidiananao ary hamaritana izay mety indrindra amin'ny tsironao!
May 9, 2009 amin'ny 1: 31 AM
ANDRIAKAKY Ô. Misaotra anao nanoratra an'ity. Manana fifandraisana fitiavana / fankahalàna amin'ny Twitter aho noho io antony io. Omaly fotsiny dia najanoko ny fampandrenesana satria nandany fotoana be fotsiny aho tamin'ny fanodinana mpanaraka vaovao (foana) isan'andro isan'andro (ary tsy dia manana mpanaraka firy toa ny sasany akory aho).
May 21, 2009 ao amin'ny 10: 35 PM
Nihevitra aho fa fanovana ho anao io. Tsaroako ny filazanao fa nanaraka azy avy hatrany izay nanaraka anao ary liana amin'ny tsirairay amin'ny mpanaraka anao ianao. Manontany tena ianao hoe inona no nahatonga ny fanovana amin'ny ankapobeny araka ny hevitrao momba ity paikady ity? Ny spam fotsiny ve?
Apr 6, 2011 amin'ny 1: 09 AM
Manaiky aho, heveriko fa ireo fitaovana manaraka ho azy ireo dia tsy miteraka soatoavina tena izy ho an'ny mpanaraka sy ny mpanaraka. Mampalahelo ny mahita ity lahatsoratra ity efa ho 2 taona izao.